Nanjing Jianke Machinery Co., Ltd kwakasimbiswa zvishoma nezvishoma mune rimwe pamusoro rubatsiro kuti muchina mudziyo maindasitiri munyika. Umbwa muna 1993, JIANKE chinotarisa mukugadzira Swiss-mhando otomatiki lathe kuti pagadzirwe diki, kunzwisisa uye zvakarurama simbi zvinoriumba dzose nguva.
Kusvikira zvino, tine mhando nhatu Swiss-mhando otomatiki lathe, Z series, M akatevedzana uye W series, izvo zvinogona kugutsa dzakawanda zvinodiwa akasiyana minda: Aerospace, mauto, zvokurapa, motokari zvikamu, etc.
All JIANKE michina dzinobva noungwaru zvigadzirwa uye zvinoriumba, zvakadai chokurukisa mabheyaringi, kutungamirira njanji uye servo Motors vari zvakananga kubva pamusoro bhizimisi vakakurumbira. Kukanda mubhedha uye zvinoriumba vari machine psac nokuda fekitari kwedu kuitira yokuisvonaka.
JIANKE chandagwinyira vavariro "tevera kwazvo zvigadzirwa, vanoshumira musika yose". mainjiniya edu tsvaka kuvandudza muchina kunyatsoshanda, muchina zvakarurama uye muchina makachengeteka. Application mainjiniya vakazvitsaurira kubatsira vatengi vedu kuwana Zvakanyanya Kunaka Panguva Yepamuviri kure-the-pasherefu kana tsika configured JIANKE CNC machine mhinduro anunure kunonyanyisa kugadzirwa kunyatsoshanda uye mutengo-nemari.
Zvichienderana basa muuzivi "Unhu wokutanga, mukurumbira pakutanga", JIANKE chaitwa pakupa yakavimbika zvigadzirwa, basa akakwana, nyanzvi mhinduro.